Misokatra i Bermuda amin'ny asa aman-draharaha aorian'ny Hurricane Humberto
Home » Toerana fitsangatsanganana » Misokatra i Bermuda amin'ny asa aman-draharaha aorian'ny Hurricane Humberto
Omaly alina, rivo-doza Humberto, tafiotra sokajy 3, dia nandalo 75 kilaometatra teo avaratry ny avaratra Bermudes, manome ny rivotra sy orana fatra mahasalama amin'ny nosy. Saingy ny Bermudianina dia manana traikefa betsaka amin'ny fiatrehana ny trangan-toetr'andro amin'ity karazana ity - traikefa mihoatra ny efa-jato taona. Vokatr'izany, kely dia kely ny fahasimbana, mandeha ny fanadiovana ary misokatra ho an'ny orinasa ny nosy.
Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena LF Wade (BDA), ary koa ny làlambe (ny làlambe manompo ny seranam-piaramanidina), samy nisokatra tamin'ny mitataovovonana androany. Hisokatra amin'ny zoma izao ny ivon-toerana serivisy ho an'ny mpitsidika rehetra any Bermuda, ary haverina amin'ny laoniny koa ny serivisy amin'ny sambo manerana ny nosy.
Ankoatr'izay, ny trano fandraisam-bahiny Bermuda rehetra dia miasa ary vonona handray ireo vahiny. Ho an'ireo mpitsidika rehetra izay novain'ny tafio-drivotra, ny fiantohana momba ny hotely Bermuda dia manome alalana ny vahiny hanova ny famandrihany amin'ny hotely tsy misy sazy. Makà antsipiriany bebe kokoa momba ny antoka.
“Rehefa nosokafana ny seranam-piaramanidina, efa mandeha tsara ny fanadiovana ary kely ny fahasimbana, vonona handray ireo mpitsidika sy vondrona efa voatsidika hitsidika ny faran'ny herinandro izao i Bermuda, miaraka amin'ireo aingam-panahy hanao izany amin'ny lanitra manga sy ny mari-pana tonga lafatra. eto, ”hoy i Kevin Dallas, tale jeneralin'ny Bermuda Tourism Authority.
Raha tonga any Bermudes ianao mandritra ny volana fararano, rehefa mijanona ny mari-pana mafana dia hiaina ny hetsika ivelan'ny Nosy Atlantika mampientanentana indrindra ianao, sakafo matsiro ary hetsika tsy manam-paharoa.
• vanim-potoanan'ny lobizary spiny: manomboka amin'ny volana septambra ka hatramin'ny martsa dia mitadiava sakafo matsiro Bermuda. Ny lozika spiny dia tena traikefa an-dranomasina matsiro.
• Taste of Bermuda (Oktobra 11-13): Tsy te-tsy hahita an'io fanao fanao isan-taona io ireo mpitia sakafo sy divay, izay manandrana fanandraman-divay, fitsangatsanganana an-tongotra, fifaninanana chef mandritra ny telo andro ary ny festival sakafo mandritra ny andro manasongadina Tanàna maro an'ny trano fisakafoanana ao Hamilton.
• Tompondakan'i Bermuda (31 oktobra - 3 nov.): Ny hetsika ofisialy PGA TOUR ao amin'ny Port Royal Golf Course malaza any Bermuda dia manome rano mangirana sy manga ary greens mahatalanjona. Halefa amin'ny fahitalavitra iraisampirenena eo amin'ny Golf Channel.
• World Rugby Classic (2-9 nov): Ny sasany amin'ireo atleta rugby lehibe indrindra eran-tany dia nivory tao Bermuda ho an'ny hetsika iray izay nanintona ireo mpankafy fatratra ny fanatanjahantena.
Ny fahatapahan'ny famatsiam-bola any Edinburgh dia mitondra ny fiaingan'ny BestCities
Mitsubishi Aircraft Corporation hanokatra SpaceJet Montreal Center